gives - Synonyms of gives | Antonyms of gives | Definition of gives | Example of gives | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for gives
Top 30 analogous words or synonyms for gives
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ Very hazy atmosphere layers withasmall amount of methane gives them aquamarine colors such as baby blue and ultramarine colors respectively. Both have magnetic fields that are sharply inclined to their axes of rotation.
Wp:wikilinks You can also indicate the language by puttingalanguage icon after the link. This is done using by typing codice_6. For example, codice_6 displays as: . Alternatively, type codice_6, where codice_29 is the language code. For example, codice_6 gives: . See foralist of these templates and the list of ISO 639 codes.
Punk pathetique Peter and the Test Tube Babies သည် ၁၉၈၀ဇူလိုင်တွင် ပထမဆုံးထူးခြားခဲ့သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ vinyl ပထမဆုံး album "Oi!" သည် ထိုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ထွက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ပြင်းပြသည်မှာ အဓိပ္ပာယ်မရှိသောစာသားများနှင့် ထူးဆန်းသော စာသားများမှာ The Queen Gives Good Blow Job နှင့် Elvis is Dead, Toy Dolls တို့ကို Sunderland အခြေစိုက်တီးဝိုင်းများပါ၀င်သည်။ punk pathetique ကို ဖျော်ဖြေမှုသို့ ချဉ်းကပ်စေခဲ့သည်။ Toy Dolls Singer Michael “Olga” Agar သည် ၁၉၈၀မတ်လတွင် sound မဂ္ဂဇင်းတွင် တင်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ new wave အုပ်စုဖြစ်ပါတယ် သို့သော် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဣန္ဒြေမရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့သီချင်းတွေဟာ လှပသော ကလေးဆန်လွန်းပါတယ်။သို့သော် သူတို့ဟာ အရာဝတ္ထုများအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ လူတွေဟာ
ယူနီကုဒ် Unicode gives higher priority to ensuring utility for the future than to preserving past antiquities. Unicode aims in the first instance at the characters published in modern text (e.g. in the union of all newspapers and magazines printed in the world in 1988), whose number is undoubtedly far below2= 16,384. Beyond those modern-use characters, all others may be defined to be obsolete or rare; these are better candidates for private-use registration than for congesting the public list of generally-useful Unicodes.
ကရာတေးဒို ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ ဆိုသည်မှာ မိမိ၏ လုံခြုံမှုအတွက် ခုခံကာကွယ်သော နည်းပညာ များကိုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်လုံပညာဟုလည်းခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြသည်။ မည်သူမဆို မိမိ၏အသက်၊အရှက်၊လုံခြုံမှုကို ထိပါးနှောက်ယှက်လာလျှင် ခုခံကာကွယ်ခွင့် (The Right to Equal Protection or The right of self-defense) ရှိပေရာ ခုခံကာကွယ်မှုနည်းပညာများသည်လည်း နိုင်ငံအလိုက် လူမျိုးစုအလိုက် အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွန်းလာကြပေသည်။ The right of self-defense (also called, when it applies to the defense of another, alter ego defense, defense of others, defense ofathird person) is the right for persons to use reasonable force or defensive force, for the purpose of defending one's own life or the lives of others, including, in certain circumstances, the use of deadly force. ကိုယ်ခံပညာအနေဖြင့် မိမိအား နှောက်ယှက်ထိပါး စော်ကားသူများအား အချိန်မဆိုင်းပဲ ချက်ချင်း ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပေရာ မိမိအနေဖြင့် လက်ချည်းသက်သက်(လက်နက်မဲ့) ခုခံကာကွယ်ခြင်း၊ နီးစပ်ရာ လက်နက်ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း ၊ ကြိုတင်စီမံထားသော လက်နက်ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးအစား ခွဲခြားနိုင်ပေသည်။ မိမိ၏အသက်၊အရှက်၊လုံခြုံမှုအတွက်နှင့် မိမိ၏တိုင်းပြည်၊လူမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာအတွက် ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ (karate's explosive power, combative ကရာတေး- စစ်ပညာ) ကို ၁၀၀% အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ကရာတေးကိုယ်ခံပညာမှာ လာရောက်ထိပါးသူများကိုသာမိမိအနေဖြင့် ခုခံကာကွယ်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းထိပါးသူများအား အကျိုးနစ်နာစေရန် ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်း မရှိရပေ။ The laws on self-defense vary from one event to another event, but in general you're allowed to use reasonable physical force to protect yourself from imminent or immediate physical injury. You can only use that amount of force that's necessary to stop the threat of harm. The other person lunges at you or tries to punch you, kick you, you can protect (counter attack) yourself by fighting back. If you fight back and the other person gives up or is unable to defend himself, you do NOT continue to hit him - it's an unreasonable use of force.